Elena Prudnikov - actress abanamakhono, wakwazi bagomela ngokwabo izikhathi zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Izibukeli inkanyezi cinema Soviet waziwa kakhulu ngokuthi Ekaterina Tatarinova adventure ifilimu "Captains Amabili". Were yena nezinye indima ezicacile, nakuba Elena ayethanda ukudlala kule nkundla sokudubula. Yini esiyaziyo ithatha uhambo lwayo lokudala, "ukulandisa" wokuphila?
Elena Prudnikov: Biography izinkanyezi
Ikusasa "Katya Tatarinov," wazalwa ngo-May 1949, kwenzeka Rostov-on-Don, lapho umkhaya wakubo wawuhlala. Thanda yamabhayisikobho Elena Prudnikov, ngokusho kwakhe, atholwe efunda ibanga lesine. Kwathi lapho ngane iwele iqembu idrama, owayesebenza Palace endawo Amaphayona, ngobukhulu ubunzima wathonyelwa ukuba athathe ikhanda lakhe.
Njengazo zonke izingane, wahlanganyela umbuthano yokudala, Elena Prudnikov ngiphuphe Starring. Isiphetho actress abasha Wethule isipho, lapho ayengakwazi eze ukubuyekeza izinkanyezi ku play "I Snow Queen". Ngenxa yalokho, Prudnikov hhayi kuphela esikhundleni intombazane ngesikhathi ukubuyekeza, ngoba ngangazi izwi, kodwa futhi lolungenamaphutsa kudlalwa Gerd at kwesizini, njengoba kukhumbula ngenjabulo kuze kube manje.
Elena hhayi kuphela uyakuthanda ethiyetha, kuye kwadingeka zibe nempumelelo ethile emkhakheni wezemidlalo yokuzivocavoca. Nokho, umbuzo ukuthi bayaphi ngemva kwesikole, ungalokothi zazimeleleni-ke. Le ntombazane ngiphuphe kuphela eMoscow Art Theatre School, ongumfundi waba lula, wathola isitifiketi.
Biography Elena Prudnikova ebonisa ukuthi indawo ebaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe kuye kwaba yaseshashalazini njalo. Ngemva kokuthola iziqu YaseMoscow Art Theatre, sifisa actress isikhashana emuva Rostov-on-Don lwakhe lwendabuko, athonywe umqondisi bokubeka lendawo idrama yaseshashalazini. Imisebenzi Helen yayithandwa kakhulu, kodwa esikhathini esizayo, "Katya Tatarinov" washeshe wabona ukuthi lokhu impumelelo ngeke sifinyelele kuphela inhloko-dolobha.
Esikhathini Taganka Theatre, actress Elena Prudnikov olwaqala ngokumenywa Yuri Lyubimov, inkanyezi ekuphumeni akuzange kuhlale isikhathi eside. Yakhetha ukuya Malaya Bronnaya Theatre, umqondisi kwezobuciko ngesikhathi kwaba Efros. Lo mlingisi wayengaqiniseki ukuthi ngokunemba ngesinqumo, ngoba umqondisi kwezobuciko kwaba ozithandayo - Olga Yakovleva, okuyinto ungathola zonke izindima eyinhloko. Nokho, ithalente Prudnikova kwaba nethonya elikhulu ku-Efros, kanjalo ngemisebenzi yakhe, kancane kancane waqala ukudlala izinhlamvu emaphakathi.
Elena Prudnikov - actress, walinqoba leli zwe cinema, lapho owaziwa emibuthanweni ezigcawugcawu. Ukuze DEBUT kwakhe kwakukhona imidwebo "Gypsy," lapho wenza indima cameo eminyakeni yakhe umfundi. Wabuye nengxenye ukuthwetshulwa melodrama "Odade ababili", ukudlala Lucy, kodwa ababukeli uthande wanika wayengeyena opholile.
Lotta Fischbach - indima yokuqala ezicacile e multi-Elena ngofuzo lempi ukuzidela ifilimu "Ukwehluka" Omega ". Kuyathakazelisa ukuthi candidacy izimpawu zokufuna ubukhulu actress waphikelela abadumile Oleg Dal, owa- futhi inkanyezi kule filimu. Prudnikov ukuthandwa ngokuhlale sikhumbula indlela okokuqala kwadingeka ithuba ukusebenza ziyinkosi oluvelele, lokho base bamukelwe kakade obonwa Dahl.
Bahlanganise impumelelo inkanyezi ekuphumeni wasiza multi "Captains Amabili", wathwebula Evgeniem Karelovym. Kati Tatarinovoy isithombe adalwe umdlali waseshashalazini e ifilimu, kwaba uhlobo litshwayo iminyaka eminingi. Umusa, Heroine ethembekile iye umxhwele izigidi ababukeli.
Ekuqaleni kwekhulu lama-21, ngemva hiatus eside wabuyela inkanyezi isikrini ifilimu Elena Prudnikov. Ama-Movie, engaqhathaniswa udumo nge Umdwebo "Captains Amabili", ngeshwa, ekuphileni kwakhe nokuningi ukuze akwenzekanga, kodwa nabaqondisi uyakujabulela ukunikeza actress izindima ezithakazelisayo.
uchungechunge abalandeli nikhumbule inkanyezi yephrojekthi TV "Ilungelo ukuzivikela", lapho wadlala Kate. Futhi uzinake kuyinto Umthungi wezingubo wakhe Mma Gorobetc e ogawuthola idrama "Isihlabathi". Ngokuvamile, actress wavumelana cameo izindima, elivela ethandwa "ewuchungechunge", "Umshayeli wetekisi 3," "Kamenskaya," "eMoscow Saga".
Umshado wokuqala okwenzeka impilo actress, lapho ethola idiploma eMoscow Art Theatre School. Nge inkanyezi abakhethiwe baqala ukuqomisana lokukhula phakathi neminyaka yakhe esikoleni, walindela wakhe owayesayobonana eMoscow. Nokho, Elena ngokushesha baqaphela ukuthi kwakuyiphutha, njengoba yena nomyeni wakhe babengoFakazi abantu ohluke ngokuphelele. Laba bobabili bahlukana ngokuthula.
Andrey Smirnov - owayethanda ngempela Elena Prudnikov, actress isithombe nomyeni wakhe ingabukwa ngenhla. umhlangano kwesibhamu kwenzeka ngesikhathi ukuqopha of ifilimu 'Ukuphila ngokuvumelana ", umqondisi odumile Yangihlaba umxhwele ubuhle kanye ithalente izimpawu zokufuna ubukhulu actress ngaleso sikhathi. Andrei no-Elena bebelokhu ndawonye iminyaka leminyenti. Lo mbhangqwana unendodana ezivamile Alex, elandela isibonelo abazali exhumene ezimpilweni zabo nezwe cinema. Andrew indodakazi ukuba ibuye emshadweni wayo wokuqala Prudnikova cishe indawo unina, zingabantu manje Dunya bazibiza abangane abakhulu.
Ngeshwa, actress ingabonakali kumaphrojekthi entsha, njengoba eminyakeni embalwa edlule wakhuliswa baziswa ngokomthetho umhlalaphansi wakhe.
Self-ukulayisha isibhamu Serdyukov: izici nesithombe
3D-iphrinta for metal. Ukwakha metal izihloko